Zvitoro zvepamhepo zvakavharwa! Chiitiko cheMac chiri padhuze | IPhone nhau
Zvitoro zvepamhepo zvakavharwa! Chiitiko cheMac chave pedyo
Maminetsi mashoma apfuura Apple's online zvitoro zvakavharwa kuisa nhau dzichaburitswa neMuvhuro masikati. Nhasi Gumiguru 18, 2022 tine chimwe chiitiko cheApple chakamirira uye mune ino chiitiko cheMac.
Zviri pachena kuti makomputa makuru anovandudzwa maMac, asi isu zvakare tine makuhwa uye ndoda kusimbiswa kuti isu tichaona itsva-yechitatu-chizvarwa AirPods uye ivo vangatotya kutangisa kuvandudza kweyePambaPods, wadii?
Chiitiko chisina kudonha kwakasimba
Mune ino kesi, kudonha kwezvigadzirwa zvitsva kunoonekwa nekusavapo kwavo. Zvinogoneka kuti izvi zvakanaka kana zvakaipa, zviri pachena ndezvekuti muchiitiko ichi Apple yakaita basa rekuvanza zvigadzirwa chaizvo (zvirinani panguva yekunyora chinyorwa ichi) saka masikati ano tichava nezvishamiso pane zvakanaka kana zvakaipa.
Ino ndiyo nguva yekuzorora, kudya chimwe chinhu uye kugadzirira zvese zvese kuti unakirwe nemharidzo inotarisirwa kuve imwe yeakanyanya, nekukahadzika kwakawanda pamusoro pezvigadzirwa zvitsva zvavanogona kupa nekumirira yakavandudzwa zvachose Mac renji neaya maApple ARM processor. Meseji inoratidzwa nechitoro ndeye "Tichadzoka nekukasira" kunyangwe chiri chokwadi kuti vateveri veApple vari pachena kuti kuri kuvhara kwemaawa mashoma, zvirinani kusvika kumagumo kwehurukuro iyo inotarisirwa kunge iri kuma20: 30 anenge.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Zvitoro zvepamhepo zvakavharwa! Chiitiko cheMac chave pedyo
Bowers & Wilkins Zeppelin ikozvino inotsigira AirPlay 2